Galantamine Hydrobromide - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ဆေးဝါး - Phcoker
Galantamine Hydrobromide ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Galantamine hydrobromide အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏စိတ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကုသရန်အတွက်ဆေးညွှန်းဖြစ်သောဆေးဖြစ်သည်။ Galantamine သည်အစောပိုင်း snowdrop အပင်မှ Galantus spp မှထုတ်ယူရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် galantamine ဖြည့်စွက်ချက်သည်ဓာတုဗေဒအရဖန်တီးထားသောတတိယအဆင့် alkaloid ဖြစ်သည်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏အကြောင်းရင်းကိုကောင်းစွာနားမလည်သော်လည်းအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသူများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ဓာတုအက်တတ်ချာလင်းဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းကြောင်းလူသိများသည်။ Acetylcholine သည်အခြားသူများအကြားမှတ်ဥာဏ်၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအပါအဝင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဒီဓာတု (acetylcholine) တစ် ဦး ကျဆင်းခြင်း၏စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ.
Galantamine သည်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားနှစ်ခုကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူနာများကိုအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည် acetylcholine ပမာဏကိုနည်းနှစ်နည်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ခုမှာ acetylcholine ၏ပြိုကွဲမှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့်အခြားတစ်ခုမှာနီကိုတင်းအက်စီတမ်ခိုးလ် (receptor) များအား allosteric modulation ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်နှစ်ခုသည် acetylcholine အင်ဇိုင်းပမာဏတိုးပွားစေသည်။
galantamine သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသပေးခြင်းအပြင်ဂယ်လန်းတမင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Galantamine နှင့် Lucid အိပ်မက်မက်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီမှတင်ပြသောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း galantamine ကိုရရှိရန်အတွက်မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်အိပ်စက်ခြင်းအကြားတွင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်။ အချို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်မလိုအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်စောင့်ကြပ်ထားသောအချိန်ဇယားမှတစ်ဆင့်ဂလန့်တမင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ခံစားခွင့်များကိုအားပေးလိမ့်မည်။
Galantamine ဖြည့်စွက်ဆေးပြားပုံစံများ၊ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အစားအစာများနှင့်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ရေများများသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အန်ချင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အဆင်မပြေခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤ galantamine hydrobromide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာများသောအားဖြင့်အသင့်အတင့်သာရှိပြီးသင်ဤဆေးကိုစတင်သောက်သောအခါတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ သူတို့ကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့မသွားဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ ရှူရှိုက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောအစာအိမ်နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးသွားခြင်းပြ,နာများ၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊
（1 Gal Galantamine Hydrobromide ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Galantamine hydrobromide သည်နူးညံ့သောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ရှိသောကုသရန်ဆေးညွန်းသည့်ဆေးဖြစ်သည် စိတ်ဖောက်ပြန် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်ဆက်စပ်။ Alzheimer ရောဂါသည် ဦး နှောက်ရောဂါဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ဥာဏ်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ သင်ယူမှု၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖျက်ဆီးသည်။
galantamine hydrobromide ဆေးများသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတိုးတက်မှုကိုကုသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအခြားအယ်လ်ဇိုင်းမားဆေးများနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များနှင့်အဓိကပုံစံသုံးမျိုးဖြင့်ဖြစ်ပွားသည်။ Galantamine ပုံစံများသည်ပါးစပ်ဖြင့်ဖြေရှင်းနည်း၊ ဆေးပြားနှင့်တိုးချဲ့ထားသောဆေးတောင့်များဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်） 2? ဒီဆေးကိုဘယ်သူသောက်သင့်သလဲ
Galantamine hydrobromide သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ပျော့ပျောင်းသောအလယ်အလတ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Galantamine hydrobromide သည်အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကုသရန်အတွက်ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ရောဂါ၏အဓိကဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုမလွှမ်းမိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Galantamine hydrobromide ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ပျော့ပျောင်းသောအလယ်အလတ်ရှိသောရောဂါလက္ခဏာများရှိသူများအသုံးပြုရန်ညွှန်ပြသည်။
Galantamine သည် acetylcholinesterase inhibitors ဟုခေါ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Galantamine သည် acetylcholine အင်ဇိုင်းပမာဏကိုနည်းနှစ်နည်းဖြင့်တိုးမြှင့်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ acetylcholinesterase inhibitor အဖြစ် ဦး နှောက်တွင်းရှိ acetylcholine ပြိုကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိနီကိုတင်းကင်ဆာကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင် acetylcholine ပိုမိုထုတ်လွှတ်ရန်လှုံ့ဆော်သည်။
၎င်းသည် ဦး နှောက်တွင်းရှိ acetylcholine ပမာဏကိုမြင့်တက်စေပြီး၎င်းသည်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
Galantamine သည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံဖော်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်နိုင်သည် မှတ်ဉာဏ် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါလူနာများအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုနှေးကွေးစေသည်။
Galantamine Hydrobromide သည် Alzheimer ကိုအကျိုးပြုသည်''ရောဂါ
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုပျက်စီးစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်သေစေသည်။ အမှန်တကယ်အကြောင်းအရင်းကိုလူသိများသည်မဟုတ်သော်လည်းဤတိုးတက်သောရောဂါသည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည် မှတ်ဉာဏ်နေ့စဉ်သင်ယူမှုစွမ်းရည်၊ Alzheimer ရောဂါလူနာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများသောအရာသည် acetylcholine ၏အဆင့်နိမ့်ဖြစ်သည်။
Galantamine အသုံးပြုမှုသည် Alzheimer ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောစိတ်ဖောက်ပြန်မှုလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်၎င်း၏ Dual mode လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအင်ဇိုင်း (acetylcholine) အဆင့်ကိုတိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့် Galantamine သည် acetylcholinesterase inhibitor ကိုပြောင်းပြန်နှင့်အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နီကိုတင်းဓာတ်များကိုလက်ခံသည့်အခါ acetylcholine ပိုမိုထုတ်လွှတ်သည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါစသည့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်ရောဂါများစွာ၏အကြောင်းရင်းဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်အရသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များနှင့် antioxidants များအကြားမညီမမျှဖြစ်သည့်အခါတစ်သျှူးပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်သည်။
Galantamine ဓာတ်ပြုခြင်းသည်အောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသိပ္ပံနည်းကျသောစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်အာရုံခံဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Galantamine သည် acetylcholine ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Galantamine antibacterial လှုပ်ရှားမှုထားပါတယ်။
i ။ Galantamine hydrobromide မယူမီ
အခြားဆေးဝါးများနည်းတူ galantamine hydrobromide မသောက်မီလိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
သင် galantamine နှင့် ၄ င်း၏မလှုပ်မရှားဖြစ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်မတည့်သည်ဖြစ်စေသင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။
ဆေးသောက်ရန်ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်သဘာဝကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်သင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောဆေးဝါးများအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပါ။
သင်အပါအ ၀ င်ခံစားနေရသောအခြားအခြေအနေများကိုသင်၏ဆရာဝန်အားအသိပေးသင့်သည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်သင်၌ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်၊ သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းနှင့်သင်နို့တိုက်နေခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုအကြောင်းကြားသင့်သည်။ galantamine ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်နေစဉ်ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးစကားပြောသင့်သည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်မည်သည့်ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီသင် galantamine ကိုသောက်နေကြောင်းသင့်ဆရာဝန်အားပြောရန်အရေးကြီးသည်။
Galantamine hydrobromide သက်ရောက်မှု အိပ်ငိုက်။ သငျသညျဤအရပ်မှကားမောင်းခြင်းနှင့်စက်ယန္တရား operating ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
galantamine နှင့်အရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ငိုက်မျဉ်းခြင်း၏ galantamine hydrobromide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
ii ။ သောက်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသရန်ဂယ်လမ်တမင်းဟိုက်ဘရိုင်ဘရိုဒီနမ်သည်ယေဘူယျပုံစံနှင့်အဖြစ်များလေ့ရှိပြီးယခင်ကရေမိုင်လင်ဟုသိကြသော Razadyne ကဲ့သို့သော galantamine အမှတ်တံဆိပ်များ၌တွေ့ရသည်။
Galantamine hydrobromide ကိုအားသာချက်အမျိုးမျိုးရှိသောပုံစံသုံးမျိုးဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပါးစပ်ဆေးကို4mg, 8 mg နှင့် 12 mg tablet များဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပါးစပ်ဖြေရှင်းချက်ကို ၄ မီလီဂရမ် / မီလီဂရမ်ပါဝင်သည်။ များသောအားဖြင့် ၁၀၀ မီလီမီတာပုလင်းတွင်ရောင်းသည်။ ပါးစပ်မှတိုးချဲ့ထုတ်လွှတ်ဆေးတောင့်၌ရရှိနိုင်ပါသည် 8 မီလီဂရမ်, 16 မီလီဂရမ်နှင့် 24 မီလီဂရမ်ဆေးပြား။
အစ galantamine သောက်သုံးသော သမားရိုးကျပုံစံများအတွက် (ပါးစပ်တက်ဘလက်နှင့်ပါးစပ်ဖြေရှင်းချက်) သည်တစ်နေ့လျှင် ၄ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သင်၏နံနက်ခင်းနှင့်ညနေစာအစာများနှင့်ထိုးသင့်သည်။
တိုးချဲ့ထားသောဆေးတောင့်အတွက်အကြံပြုထားသောကန ဦး ဆေးသည်နံနက်စာနှင့်နေ့စဉ် ၈ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဆေးကိုတစ်နေ့လုံးဖြေးညှင်းစွာလွှတ်ပေးရန်တိုးချဲ့ထားသောဆေးတောင့်ကိုလုံးလုံးယူသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးတောင့်ကိုမခွဲပါနှင့်။
သင် galantamine ကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင်ထားသောဆေးညွှန်းကိုပုံမှန်ပုံစံဖြင့်နေ့စဉ် ၄ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ် ၆ မီလီဂရမ်ဖြင့်သောက်သင့်ပြီး ၁၂ နာရီလျှင်အနည်းဆုံး ၄ ပတ်ကြာ ၄ လပတ်လျှင် ၄ မီလီဂရမ်သောက်သင့်သည်။
ဖြန့်ချိသည့်ဆေးတောင့်ကိုနေ့စဉ် ၁၆-၂၄ မီလီဂရမ်နှင့် ၄ ပတ်အကြာတွင် ၈ မီလီဂရမ်ပိုများစေသင့်သည်။
အမြဲတမ်းသင်၏အစားအစာများနှင့်ရေများများနှင့်အတူ galantamine ယူပါ။ ၎င်းသည်မလိုလားအပ်သော galantamine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အကြံပြုထားသော galantamine သောက်သုံးမှုသည်နေ့စဉ်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်သောက်သုံးသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်ဆေးထိုးရန်ပျက်ကွက်ပါကနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရန်နီးကပ်မှုမရှိလျှင်သတိပြုမိသည်နှင့်ချက်ချင်းယူပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ထိုးကျော်သွားနှင့်သင်၏ပုံမှန်အချိန်ဇယားနှင့်အတူဆက်လက်။ သို့သော်၊ သင့်ဆေးကို3ရက်ဆက်တိုက်လွဲချော်ပါကသင်၏ထိုးဆေးကိုစတင်ရန်သင့်အားအကြံပေးမည့်သင်၏ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
ရည်ရွယ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင့်ဆရာဝန်က ၄ င်း၏အနည်းဆုံး ၄ ပတ်ကြားကာလတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သင့်ဆေးများကိုသင့်အနေဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ သင်၏ galantamine သောက်သုံးသောပမာဏကိုသင့်အတွက်မပြုပြင်ပါနှင့်။
အကယ်၍ သင့်အားဖြန့်ချိသည့်ဆေးတောင့်ကိုပေးလျှင်၎င်းသည်ဝါးခြင်းသို့မဟုတ်ကြိတ်ခွဲခြင်းမရှိဘဲတစ်လုံးလုံးမျိုချပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးကိုတစ်နေ့လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်ပြုပြင်ထားလို့ပါ။
(2) အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်သုံးသော (အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်)
တိုးချဲ့ထားသောဆေးတောင့်သည်နံနက်တိုင်းတစ်ကြိမ်သောက်သုံးသော ၈ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်အနည်းဆုံး ၄ ပတ်အကြာတွင်နေ့စဉ် ၈ မီလီဂရမ်နှင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သင့်ဆေးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်၏အကြံပြုချက်အရနေ့စဉ် 8-8 mg ကိုသောက်သင့်သည်။
အမြန်ဖြန့်ချိသည့်ဆေးများအတွက်၊ စတင်ဆေးသည်တစ်နေ့လျှင် ၈ မီလီဂရမ်နှင့်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အစားအစာဖြင့် ၄ ကြိမ်သောက်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၄ ပတ်အကြာအပြီးတွင်သင့်ဆရာ ၀ န်မှဆေးသောက်ချိန်ကို4mg ဖြင့်တိုးနိုင်သည်။
(3) ကလေးသောက်သုံးမှု (အသက် ၀-၁၇ နှစ်)
Galantamine hydrobromide သက်ရောက်မှုများကိုအသက် (၀ ၀ ၁၇ မှ ၁၇ နှစ်) အတွင်းကလေးများတွင်မလေ့လာပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းအားဆေးပညာရှင်များမှအကြံဥာဏ်များဖြင့်သာအသုံးပြုသင့်သည်။
iii ။ ဆေးအလွန်အကျွံသောက်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်သို့မဟုတ်သင်စောင့်ကြည့်နေသည့်လူနာများသည် galantamine ဆေးပမာဏအလွန်အကျွံသောက်လျှင်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနသို့ချက်ချင်းဖုန်းဆက်သင့်သည်။ အနီးဆုံးအရေးပေါ်ဌာနသို့သင်အမြန်ဆုံးသွားနိုင်သည်။
Galantamine အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်များသည့်လက္ခဏာများမှာပြင်းထန်သောပျို့ချင်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သောအစာအိမ်ကြွက်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများလှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း၊
သင်ဆရာဝန်ကသင့်အားအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော galantamine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ရန် atropine ကဲ့သို့သောဆေးအချို့ပေးနိုင်ပါသည်။
Galantamine hydrobromide အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
galantamine hydrobromide သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောသူများအတွက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသော်လည်းမလိုချင်သော galantamine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ပါသည်။ ရှိပါတယ် galantamine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ
galantamine အသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောအသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
သငျသညျ galantamine စတင်စတင်သောအခါဤရောဂါလက္ခဏာများအဖြစ်များလေ့ဖြစ်ပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပျော့ဖြစ်ကြပြီးဆေးကိုဆက်လက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့သည်ဆက်ဖြစ်နေပါကသို့မဟုတ်ပြင်းထန်လာပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်တောင်းခံရန်သင့်ဆရာဝန်အားသေချာစွာပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်သည့်အရေပြားအဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံမျက်နှာ၊ လည်ချောင်းသို့မဟုတ်လျှာရောင်ခြင်း၊
နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးကွေးခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ မူးဝြေခင်းနှင့်မောခြင်းများအပါအ ၀ င် atrioventricular ပိတ်ဆို့ခြင်း၏လက္ခဏာများ
ပြင်းထန်အစာအိမ် / ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု
ဆီးသွားစဉ်အတွင်းမီးလောင်ရာ sensation သို့မဟုတ်နာကျင်မှု
တက်ခြင်း / တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုက်ညီ
အနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်အဖု (erythema multiforme) ။
ဤသည်အများအပြား galantamine ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးမပါဝင်စာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤဆေးကိုသောက်နေစဉ်ပုံမှန်မဟုတ်သောသက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ရပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုဖုန်းဆက်ပါ။
galantamine hydrobromide နှင့်မည်သို့သောဆေးဝါးများသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အချို့သောဆေးဝါးများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရည်ညွှန်းသည် အခြားသူများကို။ ဤရွေ့ကားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့မူးယစ်ဆေးဝါးများအလုပ်လုပ်လမ်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းနှင့်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ဖြစ်ပျက်မှုအရှိန်မြှင့်လိမ့်မည်။
လူသိများကြသည် galantamine hydrobromide interaction က အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ။ သင်၏ဆရာဝန်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆက်နွယ်မှုအချို့ကိုသတိထားမိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်သင်၏ဆေးအချို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်သကဲ့သို့ဆေးဝါးများကိုလည်းလုံးဝပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောပေါင်းစပ်မှုအတွက်ဆေးဆိုင်ကဲ့သို့သောရင်းမြစ်မှဆေးညွှန်းကိုရရန်သင့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်။
အဆိုပါ galantamine hydrobromide interaction က၏အချို့သောပါ၏
ဒီဆေးတွေကိုစိတ်ကျရောဂါကုသရာမှာသုံးပြီး galantamine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသြဇာညောင်းစေနိုင်တယ်။ ဤဆေးများတွင် amitriptyline, desipramine, nortriptyline နှင့် doxepin တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဤဓာတ်မတည့်ဆေးများသည် galantamine အလုပ်လုပ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဤဆေးများတွင် chlorpheniramine, hydroxyzine နှင့် diphenhydramine တို့ပါဝင်သည်။
ဤဆေးများသည် galantamine hydrobromide ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလွှမ်းမိုးသည်။
ဤဆေးများတွင် dimenhydrinate နှင့် meclizine တို့ပါဝင်သည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများ galantamine hydrobromide အလားတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤဆေးဝါးများကိုအတူတကွအသုံးပြုသောအခါ galantamine ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤဆေးများတွင် donepezil နှင့် rivastigmine တို့ပါဝင်သည်။
သို့သော်အချို့သောပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အတူ Synergetic အကျိုးသက်ရောက်မှုများအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
Galantamine နှင့် memantine ကို Alzheimer ရောဂါကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Galantamine acetylcholinesterase inhibitor memantine တစ်ခုဖြစ်သည်နေစဉ် NMDA အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင် galantamine နှင့် memantine ကိုအတူတကွယူသောအခါသင် galantamine တစ် ဦး တည်းကိုအသုံးပြုသည်ထက်သင်ပိုမိုသိမြင်မှုတိုးမြှင့်သည်။
galantamine နှင့် memantine အတူတကွအသုံးပြုသောအခါအစောပိုင်းလေ့လာမှုများကသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါ။
ဤဆေးများသည် galantamine မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသည်။ သင်အတူတကွအသုံးပြုခဲ့လျှင်သင် galantamine မှရိတ်သိမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဤဆေးများတွင် darifenacin, tolterodine, oxybutynin နှင့် trospium တို့ပါဝင်သည်။
ဤဆေးများတွင် dicyclomine, loperamide နှင့် hyoscyamine တို့ပါဝင်သည်။ သူတို့က galantamine အလုပ်လုပ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော risperidone အဖြစ် galantamine နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာမူးယစ်ဆေးဝါးများအတူတကွအသုံးပြုကြသည်တဲ့အခါ။ စိတ်ဖောက်ပြန်မှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးဆုတ်ခွာခြင်းစသည့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာလက္ခဏာအချို့ကိုတိုးတက်စေရန်အစီရင်ခံခဲ့သည်
Galantamine hydrobromide ကိုသင်၏ဒေသခံဆေးဆိုင်မှသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစတိုးများမှရယူနိုင်သည်။ ၏ဖောက်သည်များ galantamine ဝယ် ဆေးညွှန်းနိုင်သူအတည်ပြုဆေးဝါးကနေ။ အကယ်၍ galantamine ကိုသင်ကဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများမှဝယ်ယူပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသာအသုံးပြုပါ။
Galantamine နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖောက်ပြန်၏ရောဂါလက္ခဏာများကုသဘို့အကောင်းတစ် ဦး ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ် အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါ။ သို့သော်၎င်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ဖြစ်စဉ်ကိုမဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ရောဂါအတွက်ကုသမှုမဟုတ်ပါ။
၎င်းကိုအခြားနည်းဗျူဟာများအရအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုထုံးတွင်အသုံးပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine တိုးပွားစေသောယန္တရားနှစ်ခုကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် oxidative stress ကိုကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်အာရုံကြောကာကွယ်မှုအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။
Wilcock GK ။ Lilienfeld S. Gaens အီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါမှအသင့်အတင့်ရှိသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိလူနာများတွင်ဂယ်လန်းတမင်း၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု။ 2000; 321: 1445-1449 ။
Lilienfeld, အက်စ်, & Parys, ဒဗလျူ (2000) ။ ဂယ်လန်းတမင်း - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများ။ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသိမြင်မှုဆိုင်ရာရောဂါများ, 11 ပျော့ပျောင်း 1, 19-27 ။ https://doi.org/10.1159/000051228 ။
Tsvetkova, D. , Obreshkova, D. , Zheleva-Dimitrova, D. , & Saso, L. (2013) ။ galantamine နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျအချို့ antioxidant လှုပ်ရှားမှု။ လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, C တို့, & Schneider, အယ်လ် (2006) ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်နူးညံ့သိမြင်မှုချို့ယွင်းချက်အတွက်ဂလန်းတမင်း။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ Cochrane ဒေတာဘေ့စ, (1), CD001747 ။ https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3 ။
1.Galantamine Hydrobromide ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
3.Galantamine Hydrobromide သည် Alzheimer ရောဂါကိုအကျိုးပြုသည်
6. Galantamine hydrobromide အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
7. Galantamine hydrobromide သည်မည်သည့်ဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသနည်း။